"Lazy" indlela ukunciphisa umzimba ukuthola iphupho wobulili fair. Nokho, amafomu akukwazi uyaziqhenya eyabo ngaphandle ezinye umzamo. Ngenhlanhla, beauticians ukwazi indlela lula le nqubo, futhi banezeluleko zokwelapha, okuhlanganisa uju ukugoqa ngoba neminye futhi cellulite.
Zonke Ochwepheshe ezisonga zihlukaniswe izinhlobo ezimbili:
Hot. Ngesivinini kwegazi futhi dilates imithambo yegazi, ngenxa "sauna" umphumela, kwandisa umzimba - konke okuyizinto ukusiza izithako ezisebenzayo ukungena ngokujulile.
ukugoqa Cold. Kunciphisa ukuvuvukala, constricts imithambo yegazi nemithambo ye-capillary, aqede ukusinda imilenze. Kuye izingxenye angathuthukisa isikhumba ithoni kanye nokunciphisa isisindo, futhi nokuqinisa ulwelwesi lwama-capillary.
ukugoqa Cold, ngokungafani kuya ashisayo, ayinakho Izimo. Wonke umuntu ongenalo isengozini, kutuswa ukuhlanganisa izinhlobo ezimbili nezinqubo.
Ngu "hot" uhlobo uju ezisonga isisindo ukulahleka. Izibuyekezo kanye nemiphumela, zokupheka best futhi incazelo inqubo, funda ukubuyekeza yethu.
Honey - umsizi wethu ukwahlukahlukana. Buckwheat, umcako, ezimibalabala, ubhekilanga noma heather - engafani ukunambitheka kanye nokubukeka, kodwa zihlala zinjalo impahla yayo ezuzisayo.
Lokhu uju linenqwaba izingxenye, kuhlanganise organic acid, ama-enzyme, amaminerali, amavithamini kanye enzyme. Abantu abajwayelene uju isikhathi eside futhi cishe ngokushesha waqala ukuyisebenzisa imithi. Burns, izilonda, izilonda esiswini, Izifo ukuvuvukala - kahle "igolide amnandi" Ukungenisa akulona neze ukungabaza.
Izinwele buso, massage and isicelo - emikhiqizweni Cosmetology emangalisayo futhi wathola indawo, futhi muva nje waqala ukuthandwa ukugoqa uju Ukudla (engashiyi okufana uju massage). Thina ukuyichaza ngokuningiliziwe mayelana nale nqubo, okungathatha indawo salon ubuhle noma ekhaya.
Ufuna ukuzama uju ezisonga isisindo ukulahleka? kanjani "igolide amnandi", ngoba amantombazane nabesifazane abaningi kuseyimpicabadala, kodwa thina kuyokwembula zonke izimfihlo.
Kuyaziwa ukuthi uma Ukugoqa kubaluleke kakhulu ukwakha "sauna umphumela", asebenzisa eyaziwa epulasitikini. Ngaphansi kwalezi zimo kukhona kude ukuvezwa nokususa ngokweqile kwegazi uketshezi yanda.
umphumela Anti-cellulite ibangelwa kwema- izingxenye uju ezicutshini ezijulile. Ekuqaleni uswidi lasetshenziswa ukuqeda ikhasi orange, kodwa zokunciphisa amavolumu (ngenxa ukulahlekelwa amanzi), emva kwamaseshini ambalwa kwakunzima yini ukuba banake. Ngaphezu kwalokho, phakathi isikhumba Ukugoqa uthola izakhi esiphezulu.
Ucwaningo luye lwabonisa ukuthi omunye ihora uju ukugoqa kuyinto amahora amabili kuleli okugeza. Nokho, ahileleke izinqubo ukwelapha akufanele.
Ukuze kuzuzwe ukusebenza udinga 10-15 nezinqubo. Ngemva kwalokho, ochwepheshe batusa ukuthatha ikhefu - uma ufuna ukuphinda Inkambo engcono ngemva kwamasonto amathathu noma amane. Imvamisa amaseshini nakho kubalulekile: ngokufanele - kanye izinsuku ezingu-2-3.
Ukugoqa belulekwa ukuba afeze esiswini esingenalutho, bese angadli amahora amabili. Ngalolu suku, zama niliphuze umbuso - okungenani 2.5 amalitha amanzi ngosuku, ngoba ngenxa ukulahlekelwa uketshezi ingozi ukuphelelwa amanzi emzimbeni.
Isakhi esiyinhloko kufanele kube kwemvelo, ngakho esikhundleni esitolo hlola ngempelasonto ukujabulisa, lapho siyohlale "uju" zokubala.
Amanye amantombazane ubonana nomuntu ubuhle salon uju ezisonga isisindo ukulahleka. Izibuyekezo futhi imiphumela kulezi zifundo Nokho, iyamangalisa, njengoba izindleko zabo. Linanincane ruble 1,000 ukukhokhela isevisi eyenziwa beautician. Ayanda inani layo likwenza ubone, kulapho uthola izinketho ezengeziwe.
Isigaba sokuqala - ukulungiselela. Inketho okahle ukuvakashela sauna, ngezinye izikhathi ubuhle salon esungulwe sauna encane infrared. Khona-ke zonke uyaxebuka (ushukela noma ikhofi), esiza ukuthuthukisa kwegazi futhi ususe amaseli isikhumba esifile, futhi massage ukukhanya nge amafutha abalulekile.
Esesibili - ukugoqa. Ezindaweni ekhethiwe noma umzimba wonke sisetshenziswa uju ingxube, mhlawumbe nge izithako engeziwe. Ngokusetshenziswa ifilimu futhi ubungozi ingubo "igolide amnandi" sithuthukiswe - wena nje kufanele uphumule futhi bayakhohlwa konke imizuzu 30-40.
Isigaba sesithathu - lokugcina. Shower ugeze off ingxube. I "efanele" salon ubuhle emva inqubo, ngokuqinisekile uzonikezwa inkomishi yetiye ngoju.
Njengoba esesikubonile, lutho nzima ku inqubo akuyona, ngakho nebafati uncamela zenza uju ukugoqa isisindo ukulahleka ekhaya. Inzuzo osobala uwukuthi ukonga abiza, ngoba ukuthengwa zonke izithako ezidingekayo izobiza lesitigamu letimbili kusukela beautician okhokhelwayo.
Ngaphambi kokuqala inqubo ekhaya udinga ukuvula ikhule ezimbotsheni - ke ugeza (imizuzu 10-15).
Sebenzisa khuhla ngomumo eyenziwe noma wenze ngokwakho kusuka zekhofi namafutha ukhilimu omuncu, isibonelo.
Kancane ukukuthinta isikhumba ithawula, bese sisebenzise Ukwakheka uju (kufanele ibe nemfudumalo futhi uketshezi) ezindaweni inkinga. Uvalwe bopha nabo ninamathele ifilimu, kodwa zama uyephuza, ukugwema kabi.
Hlela ukuphumula kancane. Oku-sisongwe ngengubo yokulala, ulalele umculo owuthandayo, incwadi noma awubuke yini umdlalo we ifilimu ezithakazelisayo. Une esitolo kusuka imizuzu 40 1.5 amahora.
Sika ucwecwe uxubha esojwini eshaweni ngamanzi afudumele. Uma wayefisa, thatha soda noma usawoti okugeza.
Uju ukugoqa neminye imilenze, esiswini, izinhlangothi bungathuthukiswa ngokusebenzisa ukhilimu anti-cellulite kanye massage ukukhanya.
Uju kanye nekhofi
Ezisonga zokupheka uju, kunezindlela eziningi, kodwa omunye ethandwa kakhulu iyona inhlanganisela "uju + ikhofi."
Coffee - isiphuzo enongiwe eyaziwa futhi engcono zewashi le-alamu, negate umphumela ubuhle akunakwenzeka. Caffeine itholakala eziningi okhilimu anti-cellulite kanye ikhofi Scrubs kanye buso asezindaweni zonke salon ubuhle.
Caffeine isebenza tinkhombandlela eziningana:
- isheshisa umzimba kwegazi;
- uyasondla isikhumba;
- Kwandisa cell ubungqabavu futhi kuthuthukisa amanzi lymph.
Kuye okuthandayo kwekhofi ukulungiselela uju-Ukugoqa lingasetshenziswa ikhofi isizathu noma izizathu. Kanti-ke futhi ukuthenga okusanhlamvu ugaye ngokwakho - kulokhu uzobe baqinisekiswa ukuthi izinga umkhiqizo.
Recipe. Isipuni esisodwa zekhofi uhlanganise amabili wezipuni of uju. Ungqimba kufanele usetshenziswe ungqimba aminyene ezindaweni inkinga. Uma isandla kwakungamadodana amafutha abalulekile lemon noma ubhamubhamu, ukhululeke nabo ezisonga ikhofi-lwezinyosi kwesisindo.
Izibuyekezo futhi imiphumela leresiphi muhle kakhulu. Isihloko zonke izigaba ukulungiselela ubalekela kuze kube ngamasentimitha amabili emqulwini, isikhumba kuba soft futhi inuka kamnandi. Kubalulekile nokukhumbula ukuthi amasentimitha elahlekile akayikungilandela, nxa nibambelela inkambo ukwelashwa.
Uju kanye lwesinaphi
Ngaphezu caffeine, umkhiqizo anti-cellulite ngokuvamile utholakala "iyazifudumeza" ingxenye. Ekhaya, yakhe ephelele esikhundleni lwesinaphi powder. Imbewu ochotshoziwe zishukumisa kwegazi futhi ukusheshisa umzimba.
Indlela elula kuhlanganisa izithako kuphela ezimbili - uju, lwesinaphi, okuyinto exutshwa endaweni Ingxenye 1 no-1 bese buhlanjululwe ngamanzi ukuthola ingxube afana "amakhowe".
Isikhathi inqubo kuya ngomuntu nomuntu. Burning iqala cishe ngokushesha, futhi ukufeza umphumela udinga ume imizuzu mayelana 30-40. Sigaba sekucala kungcono ukunciphisa isikhathi imizuzu 10-15 of ubone ukusabela esikhumbeni.
Abanye abameleli ubulili fair inhlanganisela izingxenye ezimbili okubonakala kwanele 'evuthayo ". Ngosizo uviniga noshukela, ungakwazi ngcono umzimba ukugoqa uju-lwesinaphi. Izibuyekezo ukuphumelela kwalesi iresiphi kuphela ukuqinisekisa.
Ngakho, okokuqala udinga ukulungiselela ingxube lwesinaphi. Hlanganisa 2-3 tbsp. nezinkezo of imbewu ochotshoziwe, 2-3 tbsp. wezipuni ushukela, ½ of Art. spoon uviniga nosawoti. Engeza amanye art. iingobho zamanzi a ukuvumelana ukhilimu omuncu bese efakwa endaweni emnyama isisindo ngosuku.
Ngokushesha ngaphambi Ukugoqa ukuthatha amabili art. nezinkezo lwesinaphi kuphekwe noju, futhi yamafutha kancane ekunciphiseni ukuzwa esivuthayo.
Kungakhathaliseki iresiphi ekhethiwe nge lwesinaphi powder, qaphela kakhulu. Ubungozi wokusha kuphezulu, ngakho babulawa esivuthayo ukuzwa ngokushesha hashaza cool amanzi ingxube.
Uju kanye uLwandle Lukasawoti
Uju ezisonga isisindo ukulahleka ekhaya kudinga umzamo kancane. On izithako ezimbili ezengeziwe sesivele watshela - kuyinto lwesinaphi ikhofi. Nokho, njengoba ingxenye ngempumelelo, ngokuvumelana izintokazi amahle, kuyinto usawoti olwandle.
Ngokuba ukulungiswa uquqaba, uzodinga 300 g uju kanye 300 g usawoti amaqhafuqhafu. Ngo inkinga ezindaweni ingxube lasetshenziswa massaging ukunyakaza. Sabe niguquke futhi lesikwa ulale ngaphansi kwengubo yokulala imizuzu 30-50. Little umzamo umphumela massage igilavu, angasetshenziswa emva wageza hydrochloric uju ingxube.
Ufuna ukuzama uju ezisonga isisindo ukulahleka? Izibuyekezo futhi imiphumela akazange alinde isikhathi eside, kodwa kuphela ngaphansi iseluleko lochwepheshe.
Honey - a allergen evame kakhulu, ngakho amathuba yokusabela okusezingeni eliphezulu. We ukweluleka kuhlolo: sisebenzise uju oluncane ngesihloko isikhumba futhi Goqa ucwecwe, shiya ku isigamu sehora. Uma ububomvu kanye nokuhlukumezeka asivelanga, zizwe ukhululekile ukwenza uju ukugoqa isisindo ukulahleka. Izibuyekezo umphumela lwesinaphi-uju inhlanganisela izwakalwa kahle, kodwa ngeke sikwazi ukwenza ngaphandle kokuhlola.
Futhi ekugcineni, ake Ungakhohlwa mayelana Izimo:
- izifo gynecological;
- nezinkinga esimiso senhliziyo nemithambo yegazi.
Uju ukugoqa, akufanele enze abesifazane abakhulelwe, kanye khona ukuqubuka noma unezilonda esikhunjeni.
1703 - ukuthi lokhu kusho ukuthini tattoo?
Thina ukuqondisa marafet usebenzisa Vaseline: a izimfihlo ezimbalwa
Izinguquko zesayense: okufeziwe kanye namathuba
Kanjani ukuba ngibheme hookah
Imbaza: isakhiwo nendlela yempilo